ဧည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူအဖြစ်ရှိမရှိအတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အတူဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို, ငါတို့၏ website www.mh-chine.com (ကျွန်ုပ်တို့၏ site / က်ဘ်ဆိုက်) ၏သငျသညျလုပ်အသုံးပြုခြင်းကိုအုပ်ချုပ်။ သငျသညျထို site ကိုအသုံးပြုဖို့စတင်ရှေ့မှာဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ ကြှနျုပျတို့၏ site သုံးခွငျးဖွငျ့, သင်သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုလက်ခံနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့လိုက်နာရန်သဘောတူကွောငျးဖော်ပြသည်။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုရန်သဘောတူမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
သင်သည်ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုလကျခံဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးလျှင်, ဤ website ကိုအသုံးမပြုခင် + 86-574-27766888 မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ငါတို့သည်ဤစာမကျြနှာကို update များကမည်သည့်အချိန်တွင်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။ သင်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်ကိုသေချာစေရန်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခြိနျမှနျမှဒီစာမျက်နှာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီ website ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ရယူသုံး, ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသင့်ရဲ့လက်ခံမှုကိုဖော်ပြသည်။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုလက်ခံမထားဘူးဆိုရင်, ဒီ website ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါဘူးပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရုံး, #18 Ningnan မြောက်ပိုင်းလမ်း, Ningbo မှာတရုတ်သည်။
သငျသညျ + 86-574-27766888 ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှာအီးမေးလ်ကတဆင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် .
သောဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အရာအဘို့ကျနော်တို့တာဝန်ရှိသည်ဖို့က်ဘ်ဆိုက် www.mh-chine.com ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှ Access ကိုယာယီအခြေခံပေါ်မှာခွင့်ပြုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသိပေးစာမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်များကိုဝန်ဆောင်မှုရုပ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ကြိုတင်ယူထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site သည့်အချိန်တွင်မဆိုသို့မဟုတ်မည်သည့်ကာလအတွက်လက်လှမ်းမမှီပါဆိုအကြောင်းပြချက်ဆိုပါကကျနော်တို့တာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျနော်တို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမှတ်ပုံတင်ကြသူအသုံးပြုသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကို site ကို, ကန့်သတ်လိမ့်မည်။
ဒီ website က၌ပါရှိသောအပေါငျးတို့သပစ္စည်းများမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး, ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်နှင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုင်စင်နေကြသည်။ ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ပေမယ့်ဒီဇိုင်း, layout ကိုကြည့်ရှု, ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ဂရပ်ဖစ်, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကန့်သတ်ထားအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောစျေးနှုန်းစာရင်းများ, ဆောင်းပါးများ, ပုံပြင်များနှင့်အခြား text ကဲ့သို့အခြားအကြောင်းအရာမရှိပါ။
သင်, ကူးယူပြန်လည်ဖြန်ဝေ, ပြန်လည်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အရေးအသား၌အကြှနျုပျတို့၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲအခြားမည်သူမဆိုဤ website တွင်အဆိုပါပစ္စည်းများရရှိနိုင်ပါစေမည်မဟုတ်ပါ။
: သင်သည်ဤ website ကနေ print ထုတ်သို့မဟုတ် download, ပစ္စည်းများစခွေငျးငှါ
•ကြှနျုပျတို့မူပိုင်ခွင့်နဲ့ကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသားသတိပေးချက်များအားလုံးမိတ္တူပေါ်လာနှငျ့သငျပစ္စည်းများ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဤ website ကိုအသိအမှတျပွု; နှင့်
သငျသညျသငျ့လျြောသောအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်စင်ထုတ်ပေးရာမှကျွန်ုပ်တို့ထံမှသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတဆင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုင်စင်ရယူစရာမလိုဘဲစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမသုံးရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုနှင့် Seamwork + နှင့်ကုတ်အင်္ကျီအရေအတွက် (ထို "App ကို") မှကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမအွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်မှကိုအသုံးပြုပါ။ အမျိုးမျိုးသောဂဏန်းတွက်စက်အသီးအသီးကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အသုံးပြုသူ user ရဲ့လိုအပ်ခန့်မှန်းချက်အထွက်ပေါ်အခြေခံပြီးဂဏန်းတွက်စက်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဂဏန်းတွက်စက် '' စွမ်းရည်ဥပမာချည်စားသုံးမှုခန့်မှန်းချက်များနှင့်ချည်နှင့်ချည်နှင့်ချည်ရေတွက်စနစ်များပြောင်းလဲခြင်း၏အရေအတွက်၏ထိုသို့သောအားဖြင့်ခန့်မှန်းချက်များပါဝင်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပါဝင်သည်ပေမယ့်လေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုကန့်သတ်မထားအသုံးပြုသူများသည်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများ (က "သင်တန်းပစ္စည်းများ") မှရယူသည်။
သငျသညျဖတ်ရှုလက်ခံထို့နောက်ယင်း App ကိုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့အလို့ငှာဤသတ်မှတ်ချက်များလိုက်နာရပေမည်။
ယင်း App ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့အလို့ငှာ, ငါတို့သည်သင်တို့မှတစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် App ကိုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့လိုင်စင်ပေးသနားတော်မူ။ ဤသည်လိုင်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်တစ်ဦးတည်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Non-လွှဲပြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့သငျသညျကန့်သတ်သည်။
သငျသညျဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ပါကတစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံ devices များကအသုံးပြုနိုင်တဲ့ကွန်ယက်ကိုကျော် App ကိုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ပါစေမည်မဟုတ်ပါ။
သင်, copy decompile, အင်ဂျင်နီယာ reverse, disassemble ၏ source code ကိုရယူထားခြင်းမှကြိုးပမ်းမှုသည် App ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများသို့မဟုတ်တို့ကိုမဆိုစုတစုလက်ရာများ modify သို့မဟုတ်ဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယင်း App ကိုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူ:
•အ App ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများသာသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏ နှင့်
•ကျွန်ုပ်တို့သည် App ကိုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သင်တန်းပစ္စည်းများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာပါရှိသောအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှအဖြစ်မပါအာမခံသို့မဟုတ်အာမခံခကျြမြားပါစေ။ ဒီ App ကိုကမှပေါ်ပေါက်ရလဒ်များ၏အသုံးပြုမှုတစ်ခုသာလမ်းညွှန်အဖြစ်ရည်ရွယ်နေကြသည်နှင့်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှု, ငွေတောင်းခံလွှာ, ဆကျဆံဖို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုသို့မဟုတ်အလားတူမှစောဒနာကြပါဘူး။
ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်စားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို process လျှင်, ငါတို့သည်နှစ်ဦးစလုံးဤဥပဒေ (သင့်လျော်သောအဖြစ်သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်ရှင်,) သင် data တွေကို Controller ကိုရကြလိမ့်မည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးဒေတာ processor ကိုအသုံးပြုနှင့်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင် :
•သင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ, ဘယ်မှာလိုအပ်သော, ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာသို့မဟုတ်သင် App ကိုနှင့်ဤသဘောတူညီချက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားတာဝန်ဝတ္တရား၏ function ကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်တည်ရှိသည်ဘယ်မှာတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းထားစေခြင်းငှါသဘောတူ;
•သင်ကျနော်တို့တရား, ဖြစ်စဉ်ကိုသုံးပါနှင့်သင့်ကိုယ်စားပေါ်မှာဤသဘောတူညီချက်နှင့်အညီအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလွှဲပြောင်းစေခြင်းငှါငါတို့ကိုဤမျှမှသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုလွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာရလိမ့်မည်
•သင်သည်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာတတိယပါတီအကြောင်းကြားခဲ့ကြ, လူအပေါင်းတို့သက်ဆိုင်သော data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပြဌာန်းခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်နည်းတူမိမိတို့သဘောတူခွင့်ပြုချက်မှ, ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှု, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လွှဲပြောင်းပေးပြီသေချာရလိမ့်မည်
•သာဒီသဘောတူညီချက်, စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့် privacy ကိုမူဝါဒနှင့်အချိန်ဖို့အချိန်ကနေသင်တို့ကိုပေးသောမည်သည့်အရာကိုပြုသင့်သည်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီကိုယ်ပိုင်ဒေတာကို process ရလိမ့်မည် နှင့်
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုဘို့သင်တို့ဆီသို့ငါတို့တာဝန်ယူမှု (ရှိပါက) ဖယ်ထုတ်ကြဘူး:
ငါတို့သည်ဤ website ကိုသင်အသုံးပြုရသောအားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ငါတို့သည်ဤ website ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်သို့မဟုတ်မည်သည့်တိကျတဲ့အချိန်ကလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးပါဘူး။ ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤ website ရုပ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေရရှိလာတဲ့သမျှမည်သည့်မျိုးမဆိုတာဝန်ယူမှုကိုမယူဆကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်, ပစ္စည်းသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပျေါမှီခို site ပေါ်တွင်ပါရှိသော။
ကျနော်တို့ site ကိုနှင့် တွဲဖက်. အဘယ်သူမျှမအာမခံ, သို့မဟုတ်ပါကအပေါ်ပါရှိသောပစ္စည်းများပါစေ, ကြှနျုပျတို့ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအထဲက set ရှိသူများထက်အခြားအဘယ်သူမျှမတာဝန်ဆောင်ရွက်ရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ပြသထားသောပစ္စည်းင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှအဖြစ်မဆိုအာမခံချက်များ, အခြေအနေများသို့မဟုတ်အာမခံမပါဘဲထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကိုချိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီများနှင့်တတိယပါတီများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုတစ်စု၏ငါတို့သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များဖော်ပြထုတ်ပယ်:
•မဟုတ်ရင်ပညတ်တော်အတိုင်း, ဘုံဥပဒေသို့မဟုတ်ရှယ်ယာ၏ပညတ်တရားအားဖြင့်အဓိပ်ပာစေခြင်းငှါသမျှသောအခြေအနေများ, အာမခံနှင့်အခြားအသုံးအနှုန်းများ။
•ကြှနျုပျတို့၏ site နှင့် ဆက်စပ်. သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. မဆိုအသုံးပြုသူမြှုတ်သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အသုံးပြုမှုရလဒ်များကိုတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်မဆိုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ပေါ်မှာ posted ဆိုပစ္စည်းများအပါအဝင်, ဘို့မဆိုတာဝန်ယူမှု limitation မရှိဘဲ:
•ဖြုန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ရုံးအချိန်လည်းရှိ၏ ပင်ကာလတွင်လျှင်နှင့် (ပေါ့ဆမှုအပါအဝင်) ပေါ်ထွက်လာသော howsoever နှင့်တရားမျှတမှုမရှိခြင်း (သို့မဟုတ်ပရိယာယ်) ကဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိမရှိမဆိုမျိုးကိုအခြားအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်, မဟုတ်ရင်စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုသို့မဟုတ်, ဤအခြေအနေများဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုတားဆီးမရကြလိမ့်မည်ဟုပေးအပ် သင့်ရဲ့မြင်သာထင်သာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖို့ဒါမှမဟုတ်အထက်ထွက်သတ်မှတ်အမျိုးအစားမဆိုအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အခြားမည်သည့်တောင်းဆိုချက်များ။ ဤအသေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ဆမှု, မတစ်ဦးအခြေခံကိစ္စ, မသက်ဆိုင်သောဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်မရနိုငျသောအခြားမည်သည့်တာဝန်ယူမှုအဖြစ်လိမ်လည်မှု, လိမ်လည်လှည်မှားယွင်းစွာတင်ပြသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာတင်ပြဘို့ငါတို့တာဝန်ယူမှုကိုမှပေါ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာဘို့ငါတို့တာဝန်ယူမှုကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှလာရောက်လည်ပတ်သူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒနှင့်အညီသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. သတင်းအချက်အလက်စီမံပါမည်။ ကြှနျုပျတို့၏ site သုံးခွငျးဖွငျ့သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့သဘောတူသင်အားလုံးကိုဒေတာတိကျကြောင်းခိုင်လုံ။
ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်
ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက် (ကန့်သတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စျေးနှုန်းသတင်းအချက်အလက်မပါဘဲအပါအဝင်) အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, ဒီ website တွင်ပါရှိသောရှိသမျှသည်အခြားသောသတင်းအချက်အလက်သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကျိုးစီးပွားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပေးထားသည်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးနှင့် website တွင်ပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်သည်နှင့်ရက်စွဲအထိကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက်မဆိုတိအတွက်တာဝန်မဖွစျနိုငျသေချာနေတုန်း။ ရလဒ်အဖြစ်, သင်သည်ဤသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အားကိုးမနေသင့်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကိုထပ်မံအကြံဉာဏ်ကိုယူသို့မဟုတ်ဤ website တွင်ပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုယူပြီးမတိုင်မီနောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှုရှာသောအကြံပြုပါသည်။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့သငျကြှနျတျောတို့၏တာဝန်ယူမှုကိုဒီနေဖြင့်ထိခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းမဟုတ်သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လင့်ထားသည်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မဆိုလမ်းတွင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်, သူတို့ထောက်ခံကြပါဘူး။ ဒါဟာသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရာကိုအခြား website တွင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့် privacy မူဝါဒအစစ်ဆေးသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျကိုအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူလိုက်လျောမဟုတ်လျှင်သင်သည်အခြား website ကနေဒီဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ထားသည်မည်မဟုတ်ပါ:
•လင့်များ www.mh-chine.com မှာက်ဘ်ဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာမှသူဖြစ်ရမည်;
•သင်တစ်ဦးသည် frame ဒါမှမဟုတ် website ကိုလှည့်ပတ်ကိုအခြားနယ်စပ်ဖန်တီးမပြုစေခြင်းငှါ,
ဆက်ဆံဖို့ဖိတ်ခေါ် (မတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှု) သောအွန်လိုင်းအရောင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုထက်အခြား, ဒီ website တွင်ဘာမျှမဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်နေသည်မဟုတ်, ဤ မှလွဲ. သင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုနှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူထားသောကြားဆက်ဆံရေးသို့ဝငျကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်သငျ့သညျ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြားဆက်ဆံရေးအုပ်ချုပ်ရသောဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို။
သင်သည်ဤ website တွင်အမည်ရှိသို့မဟုတ်ရည်ညွှန်းသူတစ်ဦးကိုတတိယပါတီနှင့်အတူစာချုပ်လုပ်ပါကသင်သည်ထိုစာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်လိုအပ်ပါကဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုယူသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်များ, Hacking နှင့်အခြားပြစ်မှု
သငျသညျသိလျက်ဗိုင်းရပ်စ်, Trojan, worm, ယုတ္တိဗေဒဗုံးသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့သို့မဟုတ်နည်းပညာအန္တရာယ်ရှိသောအရာသည်အခြားပစ္စည်းမိတ်ဆက်ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့၏ site အလွဲသုံးစားမပြုရပါ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site သိမ်းဆည်းထားသောအပေါ်ဆာဗာသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆာဗာကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စကျွန်ုပ်တို့၏ site မှချိတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားမပြုရပါ။ သငျသညျပူးတွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေ denial-of-service ကိုတိုက်ခိုက်မယ့် denial-of-service ကိုကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ရပါမည်။
ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်ဖြင့်, သင်သည် Computer ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းအက်ဥပဒေ 1990 အောက်မှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအာဏာပိုင်များထံမဆိုဤကဲ့သို့သောဖောက်ဖျက်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့သူတို့ကိုသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့အားအာဏာပိုင်များနှင့်အတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖောက်ဖျက်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏လက်ျာဘက်ချက်ချင်းငြိမ်းလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏သင့်အသုံးပြုရန်သင်၏ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများ, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ, ဒေတာသို့မဟုတ်အခြားသောစီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အခြားနည်းပညာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြန့်ဝေ denial-of-service ကို attach ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေသို့မဟုတ် ကပေါ်, သို့မဟုတ်ပါကချိတ်ဆက်ဘယ် website မဆိုအပေါ် posted မဆိုပစ္စည်းသည်သင်၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို၏သမျှသို့မဟုတ်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုအသုံးအနှုန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, တည်ရှိမှု, ဆောက်လုပ်ရေး, စွမ်းဆောင်ရည်, တရားဝင်မှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွရှုထောင့်ကတရုတ်၏ပညတ်တရားအားဖြင့်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။
တရုတ်တရားရုံးများထဲကသို့မဟုတ်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသို့မဟုတ် website ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. ပျေါလာနိုငျရာကိုမဆိုအငြင်းပွားမှုများအခြေချရန်သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Home Home ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား --Threads --Zippers --Ribbon & တိပ် --Ropes --Laces --Buttons --Interlining တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်း --Tassel & မြိတ် / --Tailoring ပစ္စည်းများ --Garments & ဆက်စပ်ပစ္စည်း --Sewing စက် & အစိတ်အပိုင်းများ --Fabric --Others ကြှနျုပျတို့အကွောငျး --MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် --MH စက်မှုဇုန် --- Thread စက်ရုံများ --- ဖဲကြိုး & တိပ်စက်ရုံများ --- ဇာစက်ရုံများ --MH သမိုင်း --Trade ရှိုးများ --Image Galleries --Video အယ်လ်ဘမ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --Office တည်နေရာ --Feedback အဝန်း --App --ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ